साउदीबाट बन्धक वीरबहादुरको उद्धार : ७ वर्षपछि मातातीर्थ औँसीको दिन आमा-छोराको भेट « News24 : Premium News Channel
काठमाडौं । एक त बुढो शरिर, त्यसमाथि दुवै मिर्गौला फेल । यस्तो अवस्थाकी एक आमा छोराको वियोगमा छटपटाइरहेकी थिइन् । कञ्चनपुर कृष्णपुरकी ६६ वर्षीय धौली कार्की केही दिन अघि हाम्रै कार्यालयसम्म आइन् । साउदीमा बन्धक छोराको उद्दारका लागि गुहार मागिन् । ती आमालाई हामीले तत्कालै दिने आश्वासन केही थिएन –शिवाय ! ‘हामी आवाज उठाइ दिन्छौं’ भन्ने बाहेक ।
धौली कार्की र छोरा वीरबहादुरबीच हामीले भिडियो कलबाट कुराकानी गरायौं । उनको उद्दारका लागि साउदीस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरुसँग कुराकानी गर्यौं । हामीलाई वीरबहादुर कार्यरत साउदीस्थित कम्पनीका मेनेजरले नै उनलाई नेपाल पठाइ दिने प्रतिबद्धता पनि जनाए । यसपछि हाम्रो सानो प्रयासले सार्थकता पायो । वीरबहादुरको अहिले उद्धार भएको छ । उनी नेपाल फर्किएका छन् । संजोग कस्तो भने वीरबहादुरले आमा धौलीलाई माता तीर्थ औँसीकै दिन भेट गरेका छन् । सुदूरपश्चिम ब्युरोको सहयोगमा तयार पारिएको यो एक सुखद फलोअप रिपोर्ट हेरौं ।
कञ्चनपुर कृष्णपुर नगरपालिकाकी ६६ वर्षीय धौली कार्कीका छोरा वीर बहादुर कार्की उद्धारपछि नेपाल फर्किएका छन् । साउदीस्थित रियादमा बन्धक सरह जीवन विताइरहेका वीर बहादुर ७ वर्षपछि स्वदेश फर्किए । दुवै मिर्गौला फेल भएर जीवन र मृत्यसँग संघर्ष गरिरहेकी धौली अशक्त अवस्थामै हाम्रो कार्यालयसम्मै आएर छोराको उद्दारमा पहल गरिदिन आग्रह गरेकी थिइन् । वृद्धावस्था, रोगी शरिर त्यसमाथि छोराको वियोगमा तड्पेकी यी आमाको करुण पुकार सार्वजनिक गर्दै हामीले वीरहादुरको उद्धारका लागि आवाज उठाउने वाचा गरेका थियौं । हाम्रो सानो प्रयासले जस पायो । वीरबहादुर गत बुधबार त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगे ।
आमा धौली कार्कीको त्यो गुहार
मिर्गौला फेल भएपछि धौलीको जीवन अस्पताल र घर गर्दै बितिरहेको बेला छोराको उद्धारको आग्रह गर्दै उनी न्यूज २४ टेलिभिजनको कार्यालयसम्मै आएकी थिइन् । त्यतिबेला महिनौसम्म छोराको अनुहार समेत देख्न नपाएकी धौलीले छोराको अनुहार हेर्र्ने ईच्छा गर्दा हामीले भिडियो कलमार्फत छोरासँग कुरा गराइदिएका थियौँ ।
७ वर्षपछि माता तीर्थ औसीँको दिन आमा-छोराको भेट
वीर बहादुर शनिबार आफ्नो घर पुगेका छन् । तर, कस्तो संयोग ! ७ वर्षसम्म एक अर्काको अनुहार देख्न नपाएका आमा छोराको भेट माता तीर्थ औँसीकै दिन भयो । वीर बहादुरले सात वर्षपछि आमा धौलीको मुख हेर्ने शौभाग्य पाए । भेटपछि आमा धौली भन्छिन्, बाटो हेरिरहेको थिए, बल्ल छोरा आयो । आमा र छोराबीचको वर्षौपछि यो भेटको दृश्य हेर्दा जो कोहीको मन पग्लिन्छ ।
सन् २००७ मै वीर बहादुर साउदी गएका थिए । रियादस्थित ‘साउदी मार्वल गार्नेट फ्याक्ट्री’मा कामका गर्न गएका वीर बहादुर कम्पनीले फर्कन नदिएपछि बन्धक सहर जीवन विताइरहेका थिए । यति मात्र होइन कम्पनीले काम गरेका पारिश्रमिक समेत दिएको थिएन् । तर, घर फर्कने बेला वीर बहादुरले काम गरेका पारिश्रमिक पनि पाएका छन् ।
वीर बहादुरले भोग्नु परेको दुःखका विषयमा साउदीस्थित नेपाली दूतावासको ध्यानकर्षण गराएका थियौँ । दूतावासका प्रतिनिधि जीवन राईले पनि वीर बहादुरका बारे चासो राखेका थिए । तर, दूतावासले चाहेअनुसार सहयोग नगरेको वीर बहादुरले दुखेसो पोखे । दूतावासका प्रतिनिधिले उल्टै धम्क्याउने काम गरेको उनको आरोप छ ।
यता, कान्छा छोरा रामबहादुरले वृद्धा आमा धौली हाम्रो कार्यालयसम्म ल्याइ पु¥याएका थिए । वीर बहादुर अहिले घर फर्किएपछि उनको परिवार निकै खुसी छ । सरकारी निकायप्रति आक्रोश पोख्न बाध्य भएका वीरबहादुरले उद्धारका लागि सहयोग गरेको भन्दै न्यूज २४ टेलिभिजन र कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगलाई धन्यबाद दिएका छन् ।